Dhagayso:- Mid kamid ah Salaadiinta Beelaha Jubbooyinka oo sheegay Shirkii Maanta in laga saaray | Saadaal Media	Tuesday, March 11th, 2014	Home
Barnaamijka Caawo & Saadaal
Mushruuca Airport Garbahareey
Dhagayso:- Mid kamid ah Salaadiinta Beelaha Jubbooyinka oo sheegay Shirkii Maanta in laga saaray
Apr 22, 2013 - 33 Jawaabood	ShareSuldaan Cali Salaad Cismaan oo ah Suldaanka Beesha Tanaad oo kamid ah beelaha daga Jubbooyinka ayaa ku eedeeyay gudiga gacanta ku haya shirka Maamul u samaynta deegaanada Jubbooyinka inay kasoo saareen shirka xili uu doonayay inuu qaato karaka lagu garanayo Ergada ka qayb galaysa doorashada Madaxwaynaha Jubbaland.
Xili uu Warbaahinta kula hadlayay Magaalada Kismaayo ayuu si kulul u dhaliilay gudiga shirka gacanta ku haya wuxuuna ugu baaqay dhinacyada kale inay soo faragaliyaan arintani, isagoona xusay Ciidamo Boolis ah in loo dalbaday.
RIIX HALKAN SI AAD U DHAGAYSATO
AMA KU DHAGAYSO MOBILE
La wadaag Qormadaan Asxaabtaada:EmailPrintTwitterFacebookComments Fikirgaaga Dhiibo	Shabakada Saadaalnews.com Kala Soco Wararkii Ugu Danbeeyay
Nagala Xiriir E-mail:saadaalnews@gmail.com
Fadlan Fikir kaaga Ha'ahaado Mid Bulshada Waxtar u leh Fikradaha Akhristayaasha (33)
samatar says:	April 22, 2013 at 3:10 pm	kismaayo waa dekad ay leedahay kilil5,mardhaw waxaaba loosoodirayaa,10000,ciidana ,
kismaayo ninkii xoog leh ayaa iskaleh
Reply »	samatar says:	April 22, 2013 at 3:13 pm	@ jubba asal
sxb beelahii aad tirineysey mey dagaalamaan, adeer hadaalin beelahaas iney igu hoos noolaadaan ayaa loogu talagaley,hadii kale waala musaafurin
Reply »	samatar says:	April 22, 2013 at 3:23 pm	boosaso waxaa leh majeerteen
Reply »	JUBBA ASAL says:	April 22, 2013 at 3:23 pm	@ Samatar, adigaa arki doona inay dagaalamaan iyo inay maalin cad kugu celiyaan Dhoobley iyo waliba meel kasii fog ilaa aad ka tagtid magaalda abaarta, gaajada, oonka, nabad la’aanta, kufsiga, dilka, iyo dhaca ee Qab Dahar.
Reply »	OGADEN-BOY-1 says:	April 22, 2013 at 6:15 pm	JUBBA ASAL Beesha Tanaad uu ningaan sheegan mataqaaan? ma ogdahay iney yihiin darood? sidaas ma u taqaan? Waxaa layiri DOONFAAR mataahiro HAWIYE IYO ISAAQ Waligood mataahirayaan hadeysan Alle ka baqin.
Reply »	JUBBA ASAL says:	April 22, 2013 at 3:24 pm	@ Samatar, adigaa arki doona inay dagaalamaan iyo inkale. Maalin cad ayay kugu celiyaan doonaan Dhoobley iyo waliba meel kasii fog ilaa aad ka tagtid magaalda abaarta, gaajada, oonka, nabad la’aanta, kufsiga, dilka, iyo dhaca ee Qab Dahar.
Reply »	samatar says:	April 22, 2013 at 3:34 pm	@ jubba asal
ma baajuun ayaa dagaali miskiin war kismaayo anaa xoog kuqabsadey
Reply »	Cobra(Samawade) says:	April 22, 2013 at 4:31 pm	@Samatar walaal ninkan Jubba Asal ah yusan kaa faa’iideysanin oo usan kugu dirin beelaha sharafta leh ee reer Jubaland. Reer Jubaland waa isku mid, waa isku baahi, waa isku dan ayagaana is huran, beel beel kafiicana majirto.
@Samater walaal reer Jubaland diyaar uma ah inuu gurigooda gubo nin gurigiisii soo gubay, reer Jubaland waxaay diyaar u yahiin inaay horumarka Jubaland ka taliyaan oo aay ka hor yimaadaan wax kasta oo burburinaaya midnimada reer Jubaland.
@Samatar Juba Asal & Wadad Yare oo ah beesha Habaaraneey waxaay rabaan inaay isku diraan beelha reer Jubaland saay dantooda dhul balarsiga ah ugaaran, waxaay beesha Habaareney wado dan ooguma jirto beelaha Somaliyeed ee dega Jubaland.
@Samatar waxaay reer Jubaland diyaar u yahiin inaay xaliyaan khilaaf kasta oo soo bax ayaga oo danta shacabka ka hormarinaaya ta shaqsiga. Reer Jubaland diyaar uma ah inaay ku laabtaan wadadii qodxaha badneyd ee aay injineerka ka’aheyd beesha Habaaraney ee Qaran Dumis .
Somaliyeey midooba oo iska ilaaliya beesha Qarandumis (Habaaraneey) waxaay lid kutahay jiritaankiina iyo horumarkiin. Maya dhaha waxa eey wadaan kala qeybiyayaalka, “Qeybiyoo xukun” dooni meeyno beesha Habaaraneeyeey dooni meeyno!
Reply »	JUBBA ASAL says:	April 22, 2013 at 3:47 pm	@ Samatar
Haa Baajuun waa dagaalami, waxaa kale oo dagaalami, dhiigaanaga dhulka ku shubi, Gaaljecel,Jareer Weyne, Sheekhaal iyo Biimaal.
Kismaayo waaxaa leh beelaha walaalaha ah ee Samaale.
Waxaan kuu hubaa hadii si nabadgalyo ku jirta arinta Kismaayo loo xalinin, in uunan Axmad Madoobe joogi doonin, Jubana waxaan qabiiladan ka ahayn aynan joogi doonin.
Kismaayo waxaa leh beelaha Samaale.
Ogaadeen Juba hal tuulo ayuu ku leeyahay ha dhisto.
Kenyaan meel fog kuma gaarsiin doonaan.Xoogna kuma qabsanaysid doontid Kismaayo.
Reply »	OGADEN-BOY-1 says:	April 22, 2013 at 5:48 pm	JUBBA ASAL KKKKK Biyamaal maa dhahday mise anigaa u maleeyay? Biyamaal dhulgoodi ayaad xoog ku heesada shabeele oo dhan waxaa leh Biyomaal. 1990 Bey ku aamineyn balse waxaad ka qabsatay dhulgoodi.Waxaa ku aaminay beesha 8 iyo 9 margaasad beesha 9 degaan goodi ka xoogday. Baajun waaba u diiday somali nimo. Sheikhaal waxey ila dagaan kilinga 5 ilaa nfd ilaa jubooyinga iyaga oo ladhihin MARTI OGADENN MISE DAROOD laakin adiga muqdisho margeey kugu yimaaden waxaa u bixisay Marti Hiraab si mar walba ey u ogodaan iney meeshaas lagu marti galiyay kkkkk. Jareer weyn iyo elaay gabdhahoodi isbuuci hada lasoo dhaafay baad ka xoogeysay marga yaa ka aqli badan tahay? Ma Biyomaal baad u mooday doqamiin mise sheikhaal iyo gaal jecel? mise jareer weyn baad rabdaa inaad ka rarto jubooyinga? HAWIYE iyo Isaaq cidna kama aqli badna balan waxaa ku qaadnay sharaftii Dir inaa soo celino. nabada ey ku noolaayen jareer weyn iyo raxanweyn inaa soo celino, Balan waxaa ah gabar raxanweyn ah inaan lagu xoogin muqdisho. cisadii somali weyn inaa soo celino ayaa ku balan qaadaya mujrimga tadga dhibay dumargi ka fagan waayay inaa ka qabto somali ayaa balan igu ah anigaa ku rari kuna dajin kilinga 5 waana kugu ilaalin inshallah.
Reply »	Cobra(Samawade) says:	April 22, 2013 at 3:50 pm	@Smatar&Juba Asal, walaalyaal shirku waa shir Somaliyeed waxaana lagu wadaa dan shacab dan shaqsi lagu mahayo meesha. Odagan qeylayaaya waxaa fiicnaan laheyd inuu beeshisa la heshiiyo oo uu weydiisto beeshisa inaay soo dirsatay meesha uu waxaan jirin sheegaayo.
Walaalyaal qeylo, looma dhano iyo waa laga reebay waay imaan waxaan waa waxyaalihii uu burku keenay. Walaal Somaliya waxaa ka buuxa Jini boqor, kana waa jini boqor. Walaal beel dhan isin mawada noqonkarto, waxuu ninkan watonaa waa inaay beel dhan isimo noqoto.
Dan shaqsi reer Jubaland mayeey dhaheen, kala qeybiye mayeey dhaheen, ma sabre mayeey dhahin, kaligii cune mayeey dhaheen. Kaligii wanaagsane mayeey dhaheen.
Marka walaalyaal waxaa illaah lagu mahadin shirka waxaa hogaaminaaya dad dhaxdhaxaad ah oo Somalidu u simanatahay ayagaana si cadlaad ah ku xalin wax kasta oo soo baxa. Isinku hadii uu kuwa kamid ah shacabkii uu ismada uhaa soo istaageen muu u tanaa sulo.
War Soomaaliyeey qarnimada ilaaliya oo qabiilka dhaafa, war hooy Somaliyeed shacabka raba inuu wax sameeysto qaska kadaaya, war raga uu hunguriga wada oo ka qeylinaaya ka midyahoow illaah ka yaab oo tanaasul beel dhan isin mawada noqon kartee.
Reply »	Axmed cade says:	April 22, 2013 at 4:06 pm	to samatar/ waryaa mahadaad xoog yee latay yaad xukumaysaa xageed kakeentay awoodaan aad lamaqnayd w22sano war yaa masaakinta miyaad u dabawayntahay so xasuusa 1991.@100 ogaaden ayaan 2 nin kacarartay magaalada kismaayo waxaad ka tahay LOOMA OOYAAN
Reply »	JUBBA ASAL says:	April 22, 2013 at 4:11 pm	@ Samadawe
Waxa aad la qeylinaysid waa la garanaayaa. Axmad Madoobe baa adeerkaa ah.
Waxaan ogahay ergooyinka tirada badan ee jooga shirka Kismaayo boqolkiiba 60% waa Ogaadeen, boqolkiiba 20% waa Beesha Qaran Dumis. Boqolkiiba 10% waa Mareexaan, Boqolkiiba 5% waa Daaroodka kale, sida Dhulbahante, Warsangali iyo Leelkase.
Boqolkiiba 5% kayar ayaa ka joogta shirka beelaha Asalka ah ee Samaale. Waxa shirka ka joogana maba aha madaxdii matalaysan beelahan, Salaadiintoodii majoogaan, Ugaasyadoodii majoogaan, Ganacsatadoodii majoogaan, Culimadoodiid diinta majogaan, siyaasiyiintoodii majoogaan, wax miisaan kuleh qabiiladan oo shirka ka jooga majiro.
Dhaqankii hore ee Ogaadeenka lagu kasi jiray ee ahaa inay xoola dhacaan, boobaan oo casriyaysan oo ah inay maamulka boobaan, dhul aynan lahaynna uhanqal taagaan ayaa meesha kajirta.
Maamul aad boobtayna maalmo kaliya ayuu jiri karaa, ee ma waari doono.
Isnac, colaad iyo in qabiilo badan ay colaad uqaadaan Ogaadeen bay noqon doontaa.
Reply »	JUBBA ASAL says:	April 22, 2013 at 4:20 pm	@ Samadawe
Ergada aad leedahay waa lasoo xulay:
Waxaan ogahay in aynan jirin wax nimaad ah oo lagu samaleeyay ergadan ka qaybgaadanaysa shirka Axmad Madoobe uu kawado Kismaayo.
Cidda uu isagu doono ayuu shirka u ogolaadaa, kuu doonana wuu udiidaa.
Shir nidaam looraaco leh ma’aha. Dad shirka joogana dad siman ma’aha. Axmad Madoobe iyo Kooxdiisa ama qabiilkiisu waxay hubaysanyihiin, qabiilada kale ee magaalada joogana ma hubaysana. Dad aan sinayn nidaam mawada sameysan karaan. Mar hore waa inay beelu sinmaan, ergooyin siman loo qaybiyo, watqi ay nadadi jirtana shirka la qabto, dadka goboladda iyo dagmooyinkuna ay isu socon karaan.
Beelaha Jareer, Sheekhaal, Biimaal, Baajuun, Cawrmale, Gaaljecel, Dabarre, Macalin Wayne iyo Ajuuraan, waa sagaal qabiil oo labada Jubada si wayn udagan, shirka dad iyaga matala majoogaan, qof qof beelahan kasoo jeeda way joogaan, laakiin dad matala iyaga oo danahooda inay ilaaliyaan ujooga majoogaan shirkan.
Qof qof ka kajooga beelahan shirka Kismaayo waa dad kayar 5% isugayn qabiiladan sagaalka (9) ah.
Marka Kismaayo shir dadka Juba dagan ay sameysteen ma’aha waa shir uu qabiil aabulay, dano gooni ahna ka leeyahay, taasna cid ogolaan karta majirto.
Reply »	Cobra(Samawade) says:	April 22, 2013 at 4:46 pm	@Axmed Cade Faroole waa madaxweyne qaran waxuuna rabaa inuu Diiratada kaa samata bixiyo. Waxuu rabaa in uu ku baro inaan qabiil laga dhaxraadinkarin qaran. waxuu rabaa inuu ku baro horumarka iyo walaalnimo kuwada noolaanshaha.
waxuu rabaa inuu Somaliya ku soo celiyo bari samaadkii,
@Axmed Xamar heeysoo Shabeelada Hoose nabad gali. @ Axmed Xamar heeyso oo Jubaland nabad gali. @Axmed Xaamar heeyso oo Putland nabad gali. @Axmed Xamar heeyso oo Somaliland nabad gali. @Axmed Xamar heeyso oo Baay iyo Bakool nabad gali!
@Axmed imaanso oo haku deeqdo meesha aad degto. @Axmed umada Somaliyeed ee aad kolba shaati u soo xiraneyso hantidooda iyo dhigoodu waa kaa xaaran e nabadgli. @Axmed qarnimada u istaag oo qabiilka dhaaf. @Axmed danta shacbka ka hormari ta qabiilka iyo shaqsiga. @Axmedoow Qabiil qaran ma noqdo. Qabiil qaran ha ka dhaxraadinin, qaranimada ka dhaxraadi midnimada iyo cadaalad iyo sinaan in loo sameeyo Somalida. Axyaa wadani!!!
Reply »	Cobra(Samawade) says:	April 22, 2013 at 4:54 pm	@Juba Asal walaal “Waa baryey Sacabo laguma qarin karo” Walaal beesha Habaaraneey soo ma daasho shati kasta xiratye, xitaa inaay hal tuulo xukunto waa ku guuleysan weeyday.
Firi, Cabid qabdii qabqablihii ugu weynaa ee beesha Habaareneey (Qaran Dumis) oo markuu Somaliya diirtay asaga oo kaba la ka laabtay Somalida nabada jecel Shabeelada Hoose,Jubalandida nabada jecel iyo beesh Abgaal ee nabada jecel(Xamar)
Beesha habaraneey Somalidu weeynacday beentooda iyo imaanla’antoodii Somali dhaafe, iyagaa isku nacay.@Juba Asaloow beenta beesha Habaaraneey kama soconeeyso Jubland iyo Shabeelada Hoose. Beesha Majeerteen waa boqoradii Somaliyeed, waa boqoradii Xamar samata bixiyay. waa Boqorada habeen iyo maalin u taagan mideeynta SOMLIYEED iyo dhisida Somaliya meesha aay beesha Habaaraneey aay diirtay Somaliya oo dhan. Illaah baa mahadii hadeey Somaliya nacday, aragtayna beenta beesha Habaaraneey.
Somaliyeed midnimo, Somaliyeey qabiil diid, Somaliyeey dadka idinkala qeybinaaya diida. Somaliyeey isu samra oo isu tanaasula saad qaranimadiinii u ceshataan.
Qabiil ogaayaasha beesha Habaaraneey Yur, yur Yur dhaha oo diida. Shabaab waa Habaaraneey, Qarndumis iyo lidka qaranka waa Habaaraneey ee isku meel ooga soo wada istaaga oo u istaaga inaad Somaliya dhitaan. Axyaa Wadani!!
Reply »	GEDO says:	April 22, 2013 at 4:57 pm	Nin qabyaalad doojoow
Doqonniimo waa cudur
Haddii aad dux leedahay
bal docdaada uun eeg
Inta dumar agooma ah
Inta dhiig dad lagu qubay
Inta darib nin lagu cunay
Inta duul ku qaran jabay
Debec yaa lahaayeey
Maxaa degel ku baaba’ay
Maxaa dhacay Umula-doox
Anigaa nin dooriyo
Anigaa wax dumin kara
Maxaa Beel ku dumug tidhi
Imisaa dugaag qaday
Dubaaxdiinna loo wadhay
Darka iyo xareeddiyo
Daaq laysu qoonsaday
Maxay haad dibbiriyeen
Islaan wiilki laga diley
Dugayeey maxay tidhi
Dadab iyo aroosiyo
Aqal laba daryaalle ah
Maxaa daaha loo rogey
Waxan uga dan lee yahay
Sumad iyo Dir-soociyo
ninkii duuf ku nooloow
Alle doori baad tahay
Soomali waa duud
Dekan qabe ha joogee
Waa ul iyo diirkeed
Deris iyo tol wada yaal
Nin danlaana kala gura
Reply »	dirir says:	April 22, 2013 at 5:04 pm	@ samatar— awroow dadka kala baro beelahaas marka horeba kama soo qayb galin mana aqoonsana bahabahada meeshaas lagu hayo.
teeda kale ninka shirka laga saarey inuu tanaade daarood yahaa kaa maqan.
waxa looga saareyna wax kale maahee waa beel aan dhiigya cab ahayn.
waana beesha kaliya ee daarood ee baabuurkeedu laga soo bilaabo hargeysa ilaa kismaayo tagi karo iyadoon cidna wax u dirsaneeyn marka laga reebo beesha majeerteen oo ku cadaadisa magaalada gaalkacayo.
waxa ka saareyna waxaan filayaa in ay iyagu ku lug leeyihiin.
Reply »	Jubalander says:	April 22, 2013 at 5:14 pm	Juba Asal..Adiga Maa iska Sugta Bal waxan Sida ay Udhacaan HAla Arkee Dagaal Waa Laga Fiicanyahay Sheeqaal Qoryo Wadata Wali Laguma Arag carada ee Aderow Hada Qoryo Ha Udhiibin…
Hada Waxaa Larabaa in Ad eegto Waxa kasoo Baxo Adigoonan Dagaal Galin iyo Qasaaro AYaa laga yaabaa Inay Socon waydo hawsha marka naga daa bootada faraha badan Somali Ayaan tahay Dhulkana somalibaa leh kalsooni Darada iska daa Sida ad sheegayso Dhulka waa Dhulkaaga maamul lasameeyay Dhul Somali Leeyahay kagama Lumo inuu Kusii lahaado Mooyee……
Tankale Ogaden waxaba Ay tagan yihiin Sheeqal hada ayay nagu keenkentay ee Anaaga Iska leh amaba naga Tirsanyihiin maxaa Hada samale iyo Ogaden Ukala Jeclaatay…Waagii Hore Abe Siyad Ayaa Cano Bore Bixin Jiray Hada waxa Miyaa Lawayay….
Reply »	Cobra(Samawade) says:	April 22, 2013 at 7:01 pm	@Jubaalander, Juba Asal ma ah beesha Sheekhaal ee nabada jecel ee waa beesha Habaaraneey (Habargadir)!
Reply »	JUBBA ASAL says:	April 22, 2013 at 6:02 pm	@ Jubalander
Horta waxaan umaleynayaa inaadan taariikhda aqoonin. War Sheekhaal waa sharafta Soomaaliya, diinta iyaga soo gaarsiiyay. Aqoontada iyagaa baray, waa qabiil wayne oo Geeska Afrika meelo badan ka dagan. Beesha Hawiye madaxdooda waaye, waa asalka iyo udub dhexaadka Hawiye. Ogaadeen qoxooti Sheekhaal waxba uma oga. Ogaadeen Sheekhaal Sheegan anigu waa arkay, lakiin Sheekhaal Ogaadeen sheeganayso waligay ma arkin.
Xamar markii laga qaxay ayaan waxbadan kala bartay, aniga oo ay intaas iisii dheertay anooqta dheer ee aan uleeyahay qabiilada Gobola Juba dagan. Xamar baan ka baxay waaxaan aaday Itoobiya, Godeey baan tagay, laga bilaabo Godeey ilaa Dhagaxbuur inta aanu sii soconay, reer miyaga iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka aan sii maraynan Sheekhaal bay ahaayeen. Waa dhul ka badan 200 oo kilimitir qabiil kale maanaan ku arkin. Waa yaaba, waxaa moodaayay in dhulkan uu Ogaadeen daganayahay. Sidoo kale Qabiilka Sharafta leh ee Jareer, Kismaayo ilaa ka gaartid Oromada wabiga aad iyo aad bay udaganyihiin.
Sheekhaal, waa dad ka wayne inay Ogaadeen sheegtaan, laakiin waxaan Ogahay in Ogaadeenka Xamar dagaalkii kusoo horay ay Sheekhaal Sheegan jireen, anabaa ogaa taas.
Sheekhaal, waxay dagantahay Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkaaciyo, iyo dhulka Xiibta ah ee Garacad, Dhinowda, Hubyo, Xarardheere, Galguduud, Hiiraan, Shabeelaha Dhexe, Banaadir waaba xaruntooda, Shabeelaha Hoose, Gedo, Bay iyo Bakool, Juda Dhexe iyo Juba Hoose. Dhanka Xeebta hadii aa martid laga bilaabo Baanaadir ilaa Kismaayo Sheekhaal baa dagan, Kismaayo laga bilaabo ilaa Raaskamboonina Sheekhaal way dagantahay. Marka Sheekhaal Ogaadeen waxba uma aragto. Ka aqoon badan, Diintana iyagaaba asal u ah oo Soomaalida soo gaarsiiyay, ka xoolo badan, ka tiro badan Ogaadeen oo waa asal Hawiye Sheekhaal.
Reply »	Mr.unuun says:	April 22, 2013 at 6:28 pm	Juba feg maxaa adi kaagalay jubaland iyo wixii shiraya maad hobyiyo cadaado caqli u raadisid mise macnahaagu waa anaa gubanayee kaalaya ilagubta war dadka soomaaliyed waa kubarteen kuumana baahnee kalatag busaarada meesha ma xashiishbaa labeerayaa biimaalkaad udoodeyso awey dalkodi waataad wabigooda kagadeysey beerahoodana xashiishka kubeeraysaye adeer maseyr baa kuhaya nabada adiga mooyee soomaali intakale gaarteybaad kaxuntahay waadna udhimaneysaa cudurka kuhaya sababtoo ah daawo adna isumahaysid takhaatiirtiina wayku nacdey
Reply »	JUBBA ASAL says:	April 22, 2013 at 6:30 pm	@ OGAADEEN BOY
KKKKKKKK. Saaxiib waad iga qoslisay, fiiri anigu nin wax og baan ahay, Inta Gab-dhood ee eedooyinkaa dhaleen ama adeeryaaalkaa dhaleen ama walaalahaa ah ee aad Tigreey ogeysay si ay u kufsadaan ma garanaysaa? Wax aynan Soomaali sameyn beesha Qawsaar/Guumeysi Jecel ayaa lagu arkay. Magaalooyin dhan oo dumarkoodii lawada kufsaday waxa kufsanna ay yihiin wiilashoodii, waxaa lagu arkay Qab Dahar, Dhagaxbuur iyo Godey iyo tuulooyinka kale ee uu Ogaadeenku dago ee Kilinka Shanaad. Meel dad reer baadiyaha ah xoola laga xoogo Qab Dahar iyo tuulooyinka uu Ogaadeenku dago ayaa ka jirta. Meel uu wiilku waalkii jaajuusayo, adeerkii jaajuusayo, abtigii jaajuusayo, eedadii jaajuusayo, walaashii jaajuusayo Qab Dahar iyo waa ka jirta tuulooyinka kale ee Ogaadeenku dagan yahay ee Kilinka Shanaad.
Meel dadku ay aragagax ku noolyihiin waxaa jirta Qab Dahar, sababtoo ah maleeshiyaadka Ogaadeenka ee maalin iyo habeenba gawraca walaalahood, wiilashooda iyo gabdhahooda.
Marka Ogaadeen Boy, marka hore adigaa ubaahan inaad isxoraysid. Ogaadeen waligii tuulo xoreeyay ama qabsaday lama sheegin, hadda Kismaayo Kenyaan baa keenay ee raganimadooda maynan ku imaanin.
Marka Saaxiib, Raxanwayne, Dir iyo Hawiye, Sade iyo Jareer iyo dhamaan Beelaha walaalaha Soomaaliyeed adiga ayay kugu soo fool leeyihiin ama QaD Dahar aad ama isdhiibo oo shacabka dhinac ka raac.
Reply »	ladan liban says:	April 22, 2013 at 6:52 pm	intiina meesha kujirta “”GEDO”"ayaa idiinkugu caqli iyo cilmi fiican,ee xoolayohow meesha isaga baxa,umada hafidnaynina
Reply »	Cobra(Samawade) says:	April 22, 2013 at 7:09 pm	Somaaliyeen qabiilka joojiya, midnimada ka shaqeeya oo iska qabta diidana inaay beesha Habaareneey aay dinkala qaaybiso, qabiilka diida dhamaan Somali baa tahiin ninka qabiilka wata ee Jubba ASal yur dhahaya oo diida qabiilka iyo kala qeybinta.
Beesha Habaaraneey ee qabiilka ku qaraabaneysa ee uu ka dhashay Juba Asal dantooda ayaay Somalida beelaheeda kala duwan ku garayaan, ayagaa isdeen lahaa hadey beel kale wax u tarayaan. Walaayaal Somaliyeey qabiilka diida oo rabitaanka shacabka reer Jubaland iyo ka Shabeelada Hoose taageera. Axyaa Wadani!
Reply »	Cobra(Samawade) says:	April 22, 2013 at 7:25 pm	@Juba Asal, walaal Jubaland reer Jubaland baa iska leh. Walaal wax kasta oo wanaagsan oo u wanaagsan shacabka reer Jubland waxaa bilaabilahaa mid kamid ah beelaha dega Jubaland. Marka Hadeey wanaagan biloowday beesha Kuumada/Absame, Maxaa ka khaldan?
Walaal, qabiilka daa qabiil qaran ma noqdo. shacabka reer Jubaland ee wada dega waay u dhanyahiin shirka, ruux kasta oo hadlana waa ruux sad kordsi raba waana la xalin ,wax kasta oo soo baxa iyada oo danta guud laga hormarinaayo ta khaaska ah.
@Juba Asal hadaad waxa tari Jubaland kuma baahnee, ragbaana u diyaar ah e wax kasta oo xal u baahane, dhibka kadaa beesha Direed ee Shabeelada Hoose, Dhibka ka daa beesha Abgaal, adigana dhibka iska daa waxaad ku heshiin ladahay oo aad isku dhameeysay Galguduud iyo Galamuduge.
@Juba Asal nikii tiisa daryeelaa tukala daryeela” “Deeylo dabada aay ku Asooli maay ku aroorto” Aqliga aay beeshaada Habaaraneey wax ku toosin, Juba Asaloow maay ayadu ku heshiiso.
Reply »	JUBBA ASAL says:	April 22, 2013 at 7:54 pm	@ Samawade
Isburinta iska daa, hadalkaaku wuu isburinayaa. Sida ay hadda tahay beelaha Asalka ah Kab Laxlax iyo Ogaadeen toona isuguma ayeeri karo, sababtoo ah, waa beel xoog ku haysata Kismaayo oo aan ahyn dhulkooda. Marka beel kasta hubka laga dhigo, beelu sidaandaan, oo been awood gooni ah leh aynan jirin, ayay isugu yeeri karaan, laakiin hadda isuguma yeeri karaan, xitaa hadii ay isugu yeeraan, mayeelayno waxa kasoo baxa, mana tageyno shirkaas xaaraanta ah ee Beesha Qaran Dumis (Majeerteen) iyo Qawsaarkeeda Beesha Gumeysi Jecel, (Ogaadeen) ay kawadaan magaladeenii Kismaayo.
Reply »	Will. Hoog says:	April 22, 2013 at 8:09 pm	@ jubba asal
Gabdha baarsha jigjiga KA niikiiya ee madaxda Dds u ciyaaarfa WAA. Sheeeqaal looma ooyaanka ah ee dhab dheh horta.
Jubbaland. Shaqo daas ayaad KA qaban. Madaxda jubbaland. Ayaad karbed cas u dhigi,,, gabdhane. Xeebta kismaayo ! Ceeel caafimaad, Lido. Calanley. Xeebta qoryooley. Ayaan baraar uga dhisaya.
Jubbaland,………..DAAROD. BA LEH
Ninkii diidooow soo daa waxaad hayso,
Reply »	JUBBA ASAL says:	April 22, 2013 at 9:04 pm	@ Wiil Hoog
Saaxiib, Kismaayo waa dhul Hawiye iyo walaalahood Samaale. Kablaxlax waa lagu ogyahay Bari iyo Busaarad (Qab Dahar).
Meel kale oo aad sheegan kartaan malaha.
Wiil Hoog gabdhii aad ku kufsatay Qab Dahar, qaybna kaa ka iibisay Tigreega waa la ogyahay mana qarsoona.
Maxkamad baa ku sugeyda. Kismaayona beelaha walaalaha ah ee Gaaljecel, Sheekhaal, Cawrmale, Baajuun, Biimaal iyo Jareer baa iskaleh.
Reply »	JUBBA ASAL says:	April 22, 2013 at 9:14 pm	Waxaan kula talin lahaa beesha Qaran Dumis iyo Qawsaarkooda/Gumeysi Jecel inay iska daayaan jabhadaynta. Wuu dhamaaday waqtigii dagaal ooganimadu.
Dawlada baa udhalatay Soomaaliya. Qabyaaladii waa laga baxay. Dawladda halooga dambeeyo hawlad dalka. Kismaayo Kenya lagama maamulaayo, jabhadna mahaysan karto. Dalka dawlad baa kajirta. Ahlu Sunnada Gedo dawladda way la heshiisay, Alhu Sunnada Galguduudna dawladda way la heshiisay, ciimadoodiina dawladda ayay kamid noqdeen. Raaskambooni maxay kaga duwantahay Alhu Sunna, hadii aynan ahayn urur shisheeye ku shaqyesanaayo?
Maxay udiideen qorshaha dawladda iyo beelaha asalka ah ee Juba dagan? Maxay udiideen inay ciidamadooda ku daraan ciidamada dawladda ee Kismaayo jooga hadii aynan u adeegeynin dalal shisheeye iyo dagano shisheeye? Mar labaad waxaan ku latalin lahaa Soomaaliyeey jabhadayn, dagaal oogenimo, qabqable diineed, way ina wareerisay. Qabiil qabiil ka adkaadayna lama hayo, dawladnimo ayaa ina deeqda, Soomaali dawlad bay si xaq ah oo xalaal ah lagu doortay baan sameysanay. Si dhibka looga bayo hala taageero dawladda. Si sharafteenii usoo noqoto hala taageero dawlada. Jabhad waqtigeedii wuu dhamaaday. Kuwo jabhad iyo qabiil u durbaan tumayana dan uma hayaan dalka iyo danka Soomaaliyeed.
Reply »	Xiddig says:	April 22, 2013 at 11:16 pm	…………………………………………………………………………
Aakhiro nin tagayoow maxaa aafo lagu sheegay
Nin soomaali asalkiisu yahay waa ayaan darane
Allahayoow maxaa ardaal naga dhashiyo nacas uluufaad ah
Aanada qabiilkiyo maxaa umal xawaareeya
Isir laysku caayiyo maxaa eebo fananaysa
Maxay eeganaayaan naxliga loo ardaa falayo
Maxay awdayaan xaqiyo aayadaha diintka
Ashtako aan dhammaan iyo maxay dirirtu eedaantay
Sidii uubatada dhammaan oloshay goor baase
Way kala irhdoobeen markay eedu kala gaadhay
Nin waliba intaa kuma ekaan ways abhinayaane
Allahayoow sidii loo askumay orod ma daayaane
Waa inan iyo abtigii dhammaan aabbo iyo hooyo
Mar un nabadda noo wada adkee adigaa mudane.
Reply »	afhayeenka beesha harti says:	April 23, 2013 at 7:08 am	waryaa ninka isku sheegaya juba asal goboladaa jubaland horta dadka asal u ah ee lehi waaa kablalax marka hada anagu waxaan haysanaa saldaano la dhaho puntland, jubaland waxaan rabnaa in aan ku kibirsano ogaadeen oo daka noo xiga si dhamaan wadanka 8gobol cududeena ugu midaysano
Reply »	Axmed cade says:	April 23, 2013 at 8:57 am	NINKA ISKu Sheegay Afhayeenka @harti hadii aad wax tarayso ama taageyraso wax ku tar walaalaha dhulbahanta ama khaatuma state ku waas baa xaq kukule kismaayo waxba kaamagalin boosana kaakamabaahno@ogaadeen waxba uma qaban kartid .kismaayo ilaa gaalkacyo anaa iskale
Latest News	Dhagayso:- Barnaamijka Caawa & Saadaal,Qodobada Caawa Marxuum Xasan Diiriye oo kismaayo lagu Aasay,Xasan sheekh oo Jaban u duulay,Odayaasha Baydhabo oo DFS eedeyeey,Gaas oo Jabuuti U Duulay& Qodobo kale
- Mar 11, 2014	Kulan Wacan dhamaan dhagaystiyaasha Warbaahinta Caalamiga ah ee Saadaal Media kusoo dhawaada Barnaamijka Caawa& ...
Daawo+Dhagayso+Sawiro:- Qoys masiibo ku Habsatay oo Deeq lacageed la Garsiyeey Degmada Caabudwaaq
- Mar 10, 2014	Qaar Kamid ah Jaaliyadaha Kasoojeeda Waqooyiga Gobalka Galgaduud Oo Kudhaqan Qurbaha Ayaa Maanta Deeq ...
Dhagayso+Sawiro:- Hay”ada SADO oo Howlo Gurmad Biyo dhaamin ah ka wada deegaano ka tirsan Gobolka Gedo
- Mar 10, 2014	Howlo gurmad dhinaca biyodhaaminta ah oo lagugargaarayo kumanaan ruux oo u badan Xoolo dhaqato ...
Dhagayso:- Barakacaayaal kasoo Barakacay Gobalka Bakool oo Maanta Baydhabo Gaaray
- Mar 10, 2014	waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gaaray dad badan oo barakacayaal ah kuwaas ...
Dhagayso:- Maamulka Shabeele State oo yeeshay Madaxweyne iyo ku xigeen
- Mar 10, 2014	Shirweyne maanta ka dhacay deegaanka Calamada ee gobolka Sh/hoose,islamarkaasina ay isagu yimaadeen Ergooyinka matalayay ...
Dhagayso:- Madaxweynaha somaaliya Xasan sheekh oo Casumaad Ka Helay Dalka Jabaan kana dhoofay Muqdisho
- Mar 10, 2014	Madaxweynaha Dowladda Federalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wefdi uu horkacaayo, ayaa waxay ...
Dhagayso:- Ciidamo Dowladda somaaliya Kawada Tirsan Dagaal ku dhex Maray Janaale
- Mar 10, 2014	Wararka ka imaanaya degaanka Janaale ee gobalka shabeelaha Hoose ayaa shegaya in uu halkaas ...
Dhagayso:- Meydka Laba Ruux oo lagu Arkay Gobalka shabeelaha Hoose
- Mar 10, 2014	Wararka laga helayo deegaanada udhaxeeyo Buulo mareer iyo Shalaanbood ayaa waxay sheegayaan in saaka ...
Dhagayso:- Madaxweyne Xasan sheekh ” Eedeeynta ah hubka ayaad musuq maasuqdaan waa dagaal Siyaasadeed”
- Mar 10, 2014	Madaxweynaha Dalka somaaliya xasan sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay eedeymo dhowr jeer lo soo ...
Dhagayso:- Odayaashii Madoobe Nuunow Maxamed soo doortay oo eedeyn Xoogan u jeediyeey Dowlada Xasan sheekh
- Mar 10, 2014	Odayaashii doortay Madoobe nuunow Maxamed Madaxweynaha Maamulka Lixda Gobal ayaa waxa ay eedeyn u ...
Dhagayso:- Marxuum Xasan Diiriye oo Maanta lagu Aasay Kismaayo
- Mar 10, 2014	Allaha u naxariiste Waxaa maanta lagu Aasay magaalada kismaayo ee Xarunta Jubada Hoose Ganacsade ...
Dhagayso:- Madaxweyne Cabdiweli Gaas oo u Dhofay Jabuuti
- Mar 10, 2014	Waxaa maanta kadhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ee Caasimada Puntland Madaxweynaha Puntland Cabdiweli ...
Dhagayso:- Siyaasi Cali Seeko oo dhibsaday Maamul gobaleedyada Dalka kusoo badanaya
- Mar 10, 2014	Siyaasiga Cali Maxamuud Faarax (Cali Seeko) oo ka mid ahaa Xildhibaanadii hore ee Baarlamaanka ...
Dhagayso:- Fah Faahin Ra”iisul Wasaare Cabdiweli oo Xalay la kulmay Saraakisha Amaanka Dalka
- Mar 10, 2014	R/wasaaraha xukuumadda Federaakja Soomaaliya ayaa xalay magaalada Muqdisho kulan kula qaatay Saraakiisha hay’adaha amaanka ...
Dhagayso:- Afhayeenka AMISOM oo ka Hadlay Dagaalada Kasocda Gedo iyo Bakool
- Mar 10, 2014	Taliska ciidamada AMISOM ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay u socdaan howlgallada kasocda dalka ...
Dhagayso:- Saraakisha Gobalka Gedo oo Fah faahin Kabixiyeey Dagaalo Gobalkaas Kadhacay
- Mar 10, 2014	Afhayeenka ciidamada Dawlada Somaliye ee gobolka Gedo Khaliif Nuur Goobe ayaa waxa uu faah ...
Farsamadii Saadaal Media
© 2013 Saadaal Media - All rights reserved. Naqshadii: Saadaal Media Group.